Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga Itobiya oo doonaya inuu xidhiidh cusub la yeesho South Afrika ka dib dacwadii JOKA
Gumaysiga Itobiya oo doonaya inuu xidhiidh cusub la yeesho South Afrika ka dib dacwadii JOKA
Posted by ONA Admin	/ April 21, 2012
Dawlada Ethiopia maysan danayn jirin xidhiidhka South Africa, umana ayna arkaynin wadan ay muhiimad kaga xidhan tahay, sidaasi darteed waxay kula dagaalantay doorashadii Midawga Africa iyadoo xulufo u samaynaysay murashaxii ii ka soo horjeeday midka South Africa si uusan ugu guulaysan xilka madaxnimada Midowga Afrika qof ka socda South Africa, sababtoo ah Ethiopia ma rabto wadan dimuqraadi ah inuu qabto xilka madaxnimada Midawga Africa waxayna ka doorbidaysaa waddan digtaatooriyad wax ku maamusa inuu Midawga Africa xukumo. Waxayna ka duulaysaa qaacidada ah inay isu xilqarin aad u baahsan africaanku uu dhaqan ka dhigtay si loo dado dhibaatooyinka madaxda africaanku ku hayaan shucuubtooda ama dadka ay gumaystaan sida dhibaatada ay Ethiopia ku hayso shacabka Ogadeniya. Sidaasi darteed wadamada shucuubtooda gumaadka ku hayaayi waxay xilka madaxnimada midawga africa la rabaan waddan tigtaatooriyad ay ka jirto.
Hadaba dawlada Ethiopia ayaad moodaa inay doonayso hadda inay wax ka badasho xidhiidhkii ka dhexeeyay South Africa, waxaa ayna u soo dirtay waftiyo is daba joog ah oo ay rabto inay xidhiidhkii ka dhexeeyay wax ka badalaan waftiyadaasi. Arintan ayaa waxay bilaabmeen dacwadii ka dib waxaadna moodaa inay cabsi weyn ka qabto dhaq-dhaqaaqa iyo xidhiidhka ay jaaliyada Ogadeniya la leeyihiin bulshada iyo siyaasiyiinta Koonfur Afrika.
Diplomaasiyad Itobiya iyadoo fahamsan inuu dalka South Africa yahay wadan furfuran kana jirin cabudhis, yahayna wadan aan ogolayn in lagu tunto xuquuqda dadka africaanka ah iyo guud ahaan midka caalamkaba ayaa hada waxaa ku sugan wadanka 9 nin oo ah wafti ay Ethiopia soo dirtay waxaana la hadalhayaa oo la sugayaa inuu yimaado Malez Zinaawe bisha 5aad 25keeda ama 26keeda. Warar kale ayaa iyaguna sheegaya inuu soo raaci doono Cabdi ilay.
Hadaba jaaliyada S.Ogadeniya ayaa qaaday taalaabooyin muhiim ah aadna u qiimi badan iyadoo gudbisay macluumaad muhiim ah. Waxay jaaliyada JOKA u dirtay wafti heer sare ah saraakiisha ugu saraysa amniga gobolada qaybo ka mid ah goboladaasi oo uu ka dhacay kulamo ay wada galeen jaaliyada iyo jeneraalo u xilsaran arimaha amniga iyadoo ay ka wada hadleen dadka ka yimid Ogadeniya ee wadanka lagu laynayo inay Ethiopia qayb weyn ka tahay arimahaa, oo dad badan siyaasad loo dilay kuwa kalena ay dhici karto in wadadii kuwii horeba loo maray dilkooda inay abaabulayso. Waxaa lagu kala tagay in la wadaago macluumaadka kolba ka soo kordha arimahaa.